6 Talooyin Savvy ah oo aad ku qorsheyneyso koox safar ah oo ku saabsan miisaaniyadda | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 6 Talooyin Savvy ah oo aad ku qorsheyneyso koox safar ah oo ku saabsan miisaaniyadda
Waqtiga Akhriska: 6 daqiiqo(Last Updated On: 11/04/2021)
Waxaa si sax ah loo rumeysan yahay in safarku uu yahay hal shay oo aad iibsato si aad u noqoto ama aad u dareento hodan! And it is not always necessary that you have to part away with your hard-earned money to enjoy the riches. In kasta oo la qorsheynayey in laga baxo jasiiradaha kuleylka qorraxda lagu dhunkado, ama baraf daboolan barafka, haddii kale cidlada cagaaran ee cagaarka ah, had iyo goor waxaad samaysaa go'aanno fara badan. Make your dream come true by not making the same too complicated. La fadhiiso kooxdaada oo qorshee gudaha miisaaniyaddaada. Safarka oo dhan ka dhig mid badbaado leh. Safarrada kooxdu waa hab aad u wanaagsan oo lagu helo xiriir wadaag. Laakiin maahan dhamaan shiraacyada si habsami leh, haddii aan loogu talagalin dhammaystir. Waxay u egtahay wax aan macquul ahayn in lala socdo kharashaadka safarka, laakiin waxaa ku yaal laamo badan oo qarsoon. Ka fogow dhammaan sifooyinka xun xun ee la xiriira safarada kooxda oo si macquul ah u qorshee. Hoos ka aqriso lixda tallooyin ee aan dhib lahayn ee kuwa iyagu badbaadada lihi u qorsheeyaan safarka koox-miisaaniyad u habboon.
1. Go'aan ka Gaadha Miisaaniyadda Safarka
Haa! Waad saxantahay! Waa inaad go aansataa halka aad aadeyso marka hore inaad ka ogaato sida guud ee kharashyada. Laakiin marmarka qaar waxay u taagan tahay khiyaamo, sidii labadaba isku xiri lahaayeen. Oo iyana waa arrin aad u dhib badan sidoo kale. In kasta oo aad qorsheynaysid safarkaaga xiga kooxda asxaabtaada ah, not all can afford it equally. Sayidka, lasoco miisaaniyad xadidan, go'aansaday si wada jir ah. Qorsheynta oo dhan waxay noqon doontaa mid hagaagsan, maadaama inta badan kooxda aysan qasab ku noqon doonin inay cadaadis ku bixiyaan kharashaad aad u badan. Sidoo kale, go'aan qaadashada xagga doorashada meel aad u jeesanayso ayaa fudud, gaar ahaan miisaaniyada go'an ee maskaxda lagu hayo. Marka loo eego, aad, oo ay weheliso xubnaha kale ee kooxda, wicitaan ayey ka qaadan kartaa kharashyada dheeriga ah sida duulimaadyada, kirooyinka, cuntada, ka bixitaan, iyo wax ka badan. Complete cooperation is what is required, iyadoo la qorsheynayo safarka koox, si loo ilaaliyo wadajirka.
Luxembourg ilaa tikidhada tareenka ee Brussels
Tigidhada tareenka Antwerp ee tikidhada tareenka ee Brussels
Tikidhada Amsterdam ilaa Brussels Tareenka
Tikidhada Tareenka ee Paris illaa Brussels Tareenka
2. Kala Bixin Isugeynta Qiimaha Guud ahaan
Isku day inaad qeexdo sida loo kala qaybiyo kharashaadka. Go'aan ka gaadh qaababka iyo siyaabaha loo kala qaybiyo wadarta kharashaadka xubnaha kale ee kooxda. Tusaale ahaan, kaligaa mas'uul kama noqon doontaa ballanka qolka hoteelka oo dhan, or should you be sharing the same in half? Or, Ma xiiseyneysaa inaad qaadatid mas'uuliyadaha sida shaqaalaynta cabitaanka iyo hawl-maalmeedka? Safarada kooxeed badan, la wareegida hawlo gaar ah oo waajib ah guud ahaanba waa wax lagu amaano. Waxay yareysaa caqabadaha waxayna xalisaa dhammaan kharashyada la xiriira safarka.
Hadaad qorsheysay safar balaaran miisaaniyada mudo gaaban, isku day inaad sameysato koonto shaqsi ah. Waa inaad isla sidii hore si fiican u sameysaa. Dhammaan kuwa ku lugta leh safarka kooxdu waxay bixin karaan qaddar go'an, bil kasta, to save up the last-minute hassles. Waa ficil caqli badan oo ah qabsashada hudheellada wanaagsan, duulimaadyada hawada, iyo cunno aad u wanaagsan.
Tigidhada Tigidhada Munich ilaa Zurich Train
3. Rumeyso Duulimaadyada Dhaqaalaha iyo Goobaha Jecel-saaxiibtinimo ee Wali Socda
Intii lagu jiray qorshaha qorshaynta safarka kooxeed, xoogaa firfircoonow lacagtaada. Xoogga saar gawaarida ganacsiga. Waxa jira diyaarado badan oo qiimo jaban ku kaca, marti gelinta xirmooyin safar oo safarka ah. Qorsheyso guuritaankaaga ka dib markii aad ka wada hadlaysid waxyaabaha qarsoon ee lala yeesho asxaabtaada kooxda. Tusaale ahaan, you can chalk out your travel plan to Rome, Athens, iyo Istanbul iyada oo loo sii marayo Malta. Ama haddii kale, laga bilaabo safarka kooxdaada Berlin ilaa Prague, Budapest iyo Riga waxay u taagan yihiin xulasho wanaagsan! And how about a road trip or experiencing a week-long camp in the wilds with your group mates? Waqti badiyaa, cimiladu waxay u dhaqantaa sidii carqalad. Iyadoo aan loo eegin roob da ’culus, blazing sun, or windy blows, traveling in a car aided with a saqafka saqafka sare, waa duco! Waxay ku dhaceysaa caynsanaanta buuxda iyo xiritaanka shandadaha xirxirnaa iyadoo guud ahaanba la sameynayo waayo-aragnimo safarka mid deggan.
Tikidhada Tareenka Amsterdam To London Train
Tikidhada Tareenka Magaalada London ee London
Tikidhada Tareenka ee London ilaa London
4. Ku dadaal Smart inta aad cuntada dalbanayso
Safarka kooxdu guud ahaan waa mid guul leh marka uusan jirin muran ama dood la xiriirta cuntada, gaar ahaan. Haa! Most group trips breed’ contempt when the question arises with the food preference of each member. Xaaladaha noocaas ah, fikirka wanaagsan iyo cunista caafimaadka leh waa inay ahaadaan ujeeddadaada. Splitting in the restaurant check guarantees problems and confusion amongst the group mates. Tusaale ahaan, koox toban ah, qof keli ah ayaa bixiya biilka oo dhan a dhalo khamri ah, markii dambana dadka kale ee kooxda ku jira ayaa bixiya lacagta dhexdeeda, jahwareer weyn ayaa dhici doona. Sidaas, rumeyso inaad jebiso jeeg marwalba. Ama haddii kale, waxaad ku sameyn kartaa adoo adeegsanaya 'saaxiib-labo-labo ah'. Qeybtaada la wadaag shakhsiyaad kale oo kooxda ka tirsan oo ka hor bixi bixinta biilka..
Tikidhada Milan ee Rome Train
Tigidhada Florence ee Treenka Rome
Tikidhada Pisa illaa Rome Tareenka
Tikidhada loo yaqaan 'Rome' ee Tikidhada Tareenka
5. Si Fiican Isu xisaabin Kharashaadka
Marabtaa inaad cod farsamo ahaan farsamo yeelatid, una istaagaan sidii qof caqli badan oo kooxda ka dhex jira? Hel caawimada barnaamijyada kala duwan ee khadka tooska ah ee internet-ka ee kuxiran baahiyahaaga oo dhan, kharashyada la xiriira. Ku dhaar codsiyada sida U kala qaybsan ama Dukumentiga Google, sida ay labaduba u oggol yihiin dhammaan dadka jooga kooxda inay galaan, arag oo tafatir, sida waafaqsan baahidooda. Laakiin ka digtoonow shaqsiyadooda wanaagsan iyo kuwa tabanba.
Waxaad ku abuuri koox koox barnaamijyadan, where the group members can log in quickly and can split the entire expense in percentages. Alerts send friendly reminders to the various people concerned about clearing the bill. In kasta oo la qorsheynayey in la aadiyo kharashaadka safarka kooxda, iska ilaali inaad kharribto ama aad lacagta kula hadasho lacagaha. Xusuusnow tan si aad uhesho nabad safarka hore.
Tikidhada Amsterdam to Paris Train tigidhada
Tikidhada London iyo Paris Tareenka
Rotterdam ilaa tikidhada Tareenka Paris
Tikidhada tareenka ee Brussels iyo Paris Tareenka
6. Deji dhammaan Dhacdooyinka (Hadday jiraan)
Markaad ku raaxaysato safarkaaga kooxda oo aad si farxad leh guriga ugu tagtid, waa waqtigii la dejin lahaa biilashaadii hore (haddii ay jiraan)! Waxaa wanaagsan inaad dejiso deyn kasta oo duug ah, during the time frame that you have agreed. Haddii kale, Waxay u taagan tahay sidii shandado! Qaar badani waxay doorbidaan inay lacag ku bixiyaan codsiyada kala duwan ee khadka tooska ah, sida ay u egtahay mid xamaasad leh. And some savvier-minded individuals like to pay in person, lacag caddaan ah. Hubso inaad ku bixiso toddobaad gudihiis ama wax kabadan. Ama haddii kale, waxaad ku waayi doontaa casuumaada safarka kooxda ee soo socota.
Sidoo kale arag: https://www.saveatrain.com/blog/traveling-europe-budget/
Brussels ilaa tikidhada Tareenka Amsterdam
Tikidhada Tareenka ee London ilaa Amsterdam Tareenka
Tikidhada Tikidhada tareenka ee Magaalada Amsterdam
Paris ilaa tigidhada tareenka Amsterdam
Maahan, but a mistaken belief amongst many that traveling around the globe is never possible without an unlimited credit card or cash flow. Ama haddii uu qof kafaala qaado safarka oo dhan! Laakiin waxaa fiican in aadan isla rumaysan. Waxaa hubaala in safar aanu dhicin iyada oo aan kharash la qaadin. Tilmaamaha aan kor ku soo sheegnay waxay hubaal idinka dhigayaan inaad adiga iyo kooxdaada guur-guurayaasha wada dhigtaan safarro badan oo soo socda. Si cad ugu fiirso go'aannadaada, lana shaqayso asxaabtaada kale ee safarka ah, markaa safarka kooxdu kama yaraan doono riyo!
Ku safro qaaradda adoo raacaya tareenka iyo ballansan leh Save A tareenka!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “6 Talooyin Savvy ah oo aad ku qorsheyneyso koox safar ah oo ku saabsan miisaaniyadda” gal your site? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit leh link in post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/group-trip-on-budget/?lang=so የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
miisaaniyad grouptravel KooxdaTaageerada travelbytrain traveltips TripOnBudget
Waxaan ahay qoraa jecel iyo blogger. Qorista waxay iga caawineysaa aqoontayda, xirfado & fahamka ku saabsan warshadaha gaarka ah. Waan jeclahay qorista iyo wadaagista aqoontayda inta badan warshadaha safarka, Waxaan kaloo aaminsanahay in socdaalku fure u yahay nolol nabadeed inta aan ku faafinayo aaminsanahay adduunka oo dhan. Marka laga reebo qorista, Waxaan jecelahay inaan buugaagta Safarka iyo Akhriska - Waxaad halkan si aad u riixi kartaa ila soo xiriir